मलेसियामा सबै कामदारको न्यूनतम तलब प्रस्ताव, कति ? - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा सबै कामदारको न्यूनतम तलब प्रस्ताव, कति ?
मलेशियन ट्रेड युनियन कंग्रेस (MTUC) ले हालको आर्थिक अवस्थालाई थप सान्दर्भिक बनाउन रु.१,२०० को न्यूनतम पारिश्रमिक रु.१,५०० पुर्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
यस सम्बन्धमा MTUC ले राष्ट्रिय तलब परामर्श परिषद् मार्फत मानव संशाधन मन्त्रालयमा बृद्धिको प्रस्ताव पत्र पठाएको छ ।
MTUC उपाध्यक्ष, मोहम्मद इफेन्डी अब्दुल घानीले हालको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको स्तरसँग नमिल्ने भएकाले बृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताए । “वर्तमान न्यूनतम ज्यालामा MTUC को अडान उठाउन आवश्यक छ, जबकि एकै समयमा हामी बुझ्छौं कि रोजगारदाताहरू केवल सञ्चालन गर्न र नगद प्रवाह प्राप्त गर्न चाहन्छन्।
‘न्युनतम पारिश्रमिक रु १५०० लागू गर्न राष्ट्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारीबीच छलफल हुनुपर्ने एमटियुसीको सिफारिस छ,’ उनले हिजो सम्पर्क गर्दा भने । नतिजाको रूपमा, त्यहाँ निजामती कर्मचारीहरू छन् जसले परिवारको आवश्यकता पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न मात्र दुईवटा काम गर्नुपर्छ।
वर्तमान अवस्था र आर्थिक स्तरअनुसार प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिकको इफेन्डी अध्ययन गरिनुपर्छ ।
बिश्वकपको लागी कतार सरकारले अगष्टसम्म सबै विदेशी कामदारलाई देश छोड्न निर्देशन
कतारले आफ्नो देशमा हरेका आप्रवासी कामदारलाई अगष्टसम्म देश छोड्नका लागि निर्देशन दिएको छ । सन् २०२२ को नोभेम्बरमा हुने कतार विश्वकपको तीन महिना अगाडी सबै आप्रवासी कामदारलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको छ । सबै आप्रवासीलाई अगष्टमा कतार छोड्न भनेका छन । विश्वकपका बेला कतार सरकारले कुनैपनि आप्रवासीलाई प्रतियोगिताका बेला नदेखुन भन्ने किसिमले यो निर्णय गरेको हो । उनीहरुलाई पाँच महिना बिना तलव बिदा दिने भएको छ ।
कतार सरकारलाई यसअघि पनि न्युनतम तलव दिएर काम लगाएको भनेर मानव अधिकारवादीले विरोध गरेका थिए । एमनेस्टी इन्टरनेश्नलले अहिलेपनि यसको विरोध गरेको छ । कतार सरकारको यो निर्णयले त्यहाँ रहेका लाखौं आप्रवासी कामदारमा त्रास फैलिएको छ । यसको असर नेपाली कामदारमा पनि पर्ने भएको छ ।
हाल कतारमा चार लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार रहेका छन । एम्नेस्टीले यसरी विदामा पठाउने कामदारलाई पछि रकम दिनुपर्ने माग गरेको छ । यसका साथै उनीहरुले काम गर्ने अधिकारको हनन हुने पनि बताएको छ । कतार विश्वकपमा खटिएका कामदारहरुमा धेरैलाई किड्नीको समस्या देखिएको र उनीहरुलाई कतारको गर्मीका कारण स्वास्थ्यमा समस्या बढेको द टाइम्सले बताएको छ ।
त्यसमा नेपाली कामदार पनि परेका छन । उनीहरु स्वदेश फर्किएपछि किड्नीको समस्या देखिएर उपचारमा समस्या देखिएको द टाइम्स उल्लेख गरेको छ । चिकित्सकले पनि गल्फ देशबाट फर्किएको पाँच भागको एक भाग कामदारमा किड्नीको समस्या देखिएको बताएका छन ।